Dagaalyahanada Al-Shabaab oo deegaanka Goof Guduud kala wareegay ciidamada dowladda Soomaaliya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaDagaalyahanada Al-Shabaab oo deegaanka Goof Guduud kala wareegay ciidamada dowladda Soomaaliya
December 8, 2016 Puntland Mirror Somalia 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa maanta oo Khamiis ah kala wareegay deegaanka Goof Guduud ciidamada dowladda Soomaaliya, kadib dagaal culus oo dhexmaray labada dhinac, sida ay ilo-wareedyadu sheegayaan.
Ugu yaraan todobo qof oo katirsan dhinacyadii dagaalamay ayaa ku geeriyooday intii uu dagaalku socday, sida ay ilo-wareedyadu xaqiijiyeen.
Dagaalyahanada Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa dhowr jeer oo hore sanadkan ku dagaalamay gacan ku haynta magaalada Goof Guduud ee gobolka Bay.
Goof Guduud, ayaa qiyaastii 35km dhanka waqooyiga uga beegan magaalada Baydhabo, ee caasimada maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed.
Boosaaso-(Puntland Mirror) Qaraxa wadada dhinaceeda la dhigo ayaa lala beegsaday gaariga guddoomiyaha gobolka Bari. Sida ilo-wareedyo katirsan haayadaha ammaanka ay u sheegeen bog wareedka Puntland Mirror, qaraxa ayaa saakay oo Arbaco ah lala eegtay gaariga guddoomiyaha [...]